dmMediaConverter ihe ntụgharị multimedia na-adabere na FFmpeg | Site na Linux
DmMediaConverter ihe ntụgharị multimedia na-adabere na FFmpeg
Ihe Ntụgharị DmMedia bụ a multiplatform ngwa na nkwado maka Linux, MacOS na Windows, dabere na FFMpeg nke na-enye anyị ohere ịgbanwe faịlụ ọdịyo na vidiyo nke nwere nkwado maka ụdị ndị kachasị ewu ewu, dịka h264, h265, vp8, vp9 audio - aac, mp3, flac, pcm, vorbis n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ngwa ahụ Na-akwado njikwa nke ọtụtụ faịlụ n'otu oge ma na-enye anyị ohere ịhazi mgbanwe maka onye ọ bụla n'ime ha n'otu n'otu.
n'etiti dmMediaConverter isi atụmatụ anyị nwere ike igosipụta ikike ya iji jikọta ma ọ bụ kewaa faịlụ vidiyo, gụnyere ndepụta okwu na SRT, ịnyịnya ibu, ssa, mov_text na dvdsub na ndị ọzọ, nhazi nke iyi egwu ọ bụla.
dmMediaConverter n'adịghị ka ngwa ndị ọzọ, mgbe ị na-arụ ọrụ nke ijikọ faịlụ abụọ nwere otu njirimara, ọ gaghị eweghachite ha, nhọrọ a dị oke mma ma jiri ya zọpụta oge.
Akụkụ ọzọ na nchịkọta akụkọ na-enye anyị bụ ike gbanwee metadata faịlụ, na-enweghị mkpa ịmegharị ọzọ.
1 Main atụmatụ nke dmMediaConverter:
2 Etu esi wụnye dmMediaConverter na Linux?
3 Esi ewepu dmMediaConverter na Linux?
Main atụmatụ nke dmMediaConverter:
Ikike isonyere dị iche iche nke faịlụ (dị iche iche codecs, mkpebi, wdg) na otu faịlụ. Họrọ otu mmeputara na obosara sara mbara nke faịlụ niile.
Kewaa ma ọ bụ dozie faịlụ site na oge akara aka (na-enweghị ntinye)
Tọghata faịlụ na nnukwu na-eji eruba profaịlụ ma ọ bụ ntuziaka ntọala
Gụgharia Profaịlụ - Mepụta ma tinye profaịlụ ọdịyo na vidiyo
Job kwụ n'ahịrị: nwere ike tinye otutu ihe aga-eme na a ọrụ kwụ n'ahịrị
Ọrụ yiri ya: nwere ike na-agba otutu ọrụ n'otu oge
Image mgbanwe: na mgbanwe gosipụtara ozugbo
Nyocha: gbanwee mkpebi vidiyo
Auto Akuku: na-achọpụta rụọ kacha mma akuku ụkpụrụ maka encoder
Etu esi wụnye dmMediaConverter na Linux?
Iji wụnye dmMediaConverter anyị nwere ụgwọ ma ọ bụ rpm nchịkọta maka ntinye na sistemụ anyị.
Maka dmMediaConverter echichi na Debian, Ubuntu na nkwekọrịta, anyị ga-ibudata ngwugwu ngwugwu kwesịrị ekwesị ka anyị ije na njikọ ọzọ.
Ọ bụrụ n ’ịmaghị ihe owuwu usoro gị nwere, ị ga - eme iwu a:
Nke ị ga-enwe ike ịmata ma ọ bụrụ na sistemụ gị bụ 32 ma ọ bụ 64 ibe n'ibe ya, jiri nke a mara ụdị ngwugwu ị ga-ebudata.
Ozugbo nbudata ahụ mere, naanị anyị ga-egbu iwu na-esote iji wụnye ngwa na sistemụ anyị:
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ịdabere, ị ga-eme ihe ndị a:
Iji nwee ike wụnye dmMediaConverter na Fedora, openSUSE, CentOS na nkwekọrịta, anyị nwere ike ibudata faịlụ rpm site na njikọ na-esonụ.
Ozugbo ebudatara nbudata ahụ, naanị ị ga-eme iwu na-esote na ọnụ.
Na njedebe nke nwụnye, Naanị anyị ga-achọ ngwa ahụ na menu anyị ka anyị nwee ike ịgba ya wee bido ịnụ ụtọ ya.
N'ikpeazụ, maka ikpe nke Arch Linux na ihe ndi ozo, ngwa a di n'ime ebe nchekwa AUR, yabụ anyị ga-eji yaourt wụnye dmMediaConverter na sistemụ anyị.
Naanị anyị ga-emeghe ọnụ ma gbue iwu na-esonụ:
Ọ bụ ezie na ngwa ahụ dị ka onye edemede nke a nwere ike ịchọta na nchekwa Ubuntu ozugbo, etinyeghị m ozi ahụ etu esi esi wụnye ya ebe m na-eji mbipute 14.04 lts ugbu a ma enweghị m ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na ebe nchekwa dị ugbu a bụ ngwa.
Esi ewepu dmMediaConverter na Linux?
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ị chọrọ iwepụ dmmediaconverter gị usoro, ị ga-etinyerịrị iwu kwekọrọ na ụdị nkesa gị:
para Debian, Ubuntu na nkwekọrịta:
Mgbe maka Fedora, openSUSE, CentOS na nkwekọrịta:
N'ikpeazụ, iwepụ ya Arch Linux na nkwekọrịta:
Ọ bụrụ na ị maara ngwa ọ bụla ọzọ yiri dmMediaConverter ma ọ bụ nke anyị nwere ike ịkọ, egbula oge ịkekọrịta ya na anyị na nkwupụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » DmMediaConverter ihe ntụgharị multimedia na-adabere na FFmpeg
Ekele sitere na Cuba ... ebe a anyị mepụtara ngwa ọrụ dị ka frontend maka FFmpeg nke nwere ike ịmasị ọkacha mmasị maka ndị ọrụ na-amachaghị banyere usoro ntụgharị, ebe ọnụọgụ ọnụọgụ nke FFmpeg na nkwado ndị ọzọ yiri ya karịrị akarị, yabụ anyị kpebiri ịmepụta ihe dị mfe ma rụọ ọrụ ... ị nwere ike ile anya site na https://videomorph.webmisolutions.com/
Daalụ maka ọmarịcha ọrụ gị ...
Ndewo, ị nwere ike biputere nkuzi na otu esi atụgharị faịlụ vidiyo na faịlụ ọdịyo dịka ọmụmaatụ na mp3?
Zaghachi na legiongex
Ekele legiongex, a na-atụgharị nhọrọ ahụ na VideoMorph, lee njikọ a https://videomorph.webmisolutions.com/ na n'etiti nhọrọ nke usoro ihe omume bụ wepụ ọdịyo ma chekwaa ya na usoro MP3, ọ bụ naanị 1 pịa !!!
Echere m na ị ga-edozi ...
Marius dalacu dijo
Naanị ile anya dmMediaConverter… enyemaka. Ga-ahụ vidiyo maka nzube ahụ.
Zaghachi Marius Dalacu
LibreOffice 6.1 ga-enwe ụdị mbido nke mbụ n'ime ihe na-erughị izu abụọ
Kedu ihe bụ Swap na Linux na otu esi eji ya?